« Fambolen-kazo mahomby, antoka ho an'ny fihariana maharitra ara-toekarena » | Primature
« Fambolen-kazo mahomby, antoka ho an’ny fihariana maharitra ara-toekarena »
16 mars 2018 19 mars 2018
Imerintsiatosika, 16 martsa 2018 – Notanterahana androany 16 martsa ny fambolen-kazo niarahan’ny fianakaviamben’ny Primatiora, teo ambany fitarihan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, teny Tsimahabeomby Imerintsiatosika.
Zanan-kazo miisa 3 350 no voatsatoka tamin’ity taom-pambolen-kazo ity, ary « Fambolen-kazo mahomby, antoka ho an’ny fihariana maharitra ara-toekarena » no lohahevitra izay nosafidian’ny teto anivon’ny Primatiora.
Nandritra ny lahateniny dia nanafatrafatra ny Praiminisitra fa : « tokony ho voizina manerana an’I Madagasikara io lohahevitra izay nentina androany io. Tsy atoro antsika intsony ny maha zava-dehibe ny fambolen-kazo amin’izao fotoanan’ny fiovaovan’ny toetr’andro izao. Tokony ho fantatsika fa raha mikajy ny tontolo iainana isika dia antoky ny fampandrosoana izany, ka izay no antony hivoizanay foana fa tsy tokony atao fombafomba ny fambolen-kazo fa ilaina ny fanaraha-maso ireo zanan-kazo voavoly. Tokony jerena isaky ny faritra ny karazan-kazo volena mba hitondra vokatra tokoa izy ireny ao aoriana. Misy ny famotehana ireo hazo sarobidy manerana ny Nosy, ka tokony hentanina ny mponina amin’ireny faritra ireny mba hamboly indray hanarenana ny fahasimbana, toy ny bois de rose, ny palissandre ary ny bois d’ébène satria harena ho an’ny firenena ireny, tsy tokony avela ho potika fotsiny. Samy tomponandraikitra isika amin’izany fanarenana izany, indrindra amin’ny fambolen-kazo».
Raha nanontanian’ny mpanao gazety ny Praiminisitra mahakasika ny politika nasionaly iadiana amin’ny fandripahana ny ala dia nohazavainy fa : « tsy ny politika no tsy misy fa tokony hamafisina ny fanatanterahana eny ifotony, ary izay no itenenako hoe efa manana rafitra matipaika ny Ministeran’ny tontolo iainana mahakasika izany, ohatra amin’izany ireo foibem-paritra miaro ny tontolo iainana saingy ny fanaraha-maso no tsy ampy. Tokony miara-mientana ny rehetra ho fanatanterahana izany paikady izany ».
Nitondra fanamarihana mikasika ny resaka fandriampahalemana ihany koa ny Lehiben’ny Governemanta manoloana ireo mpanao gazety : « efa misy ny vokatra izay azo amin’ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana, saingy efa mitarazoka loatra ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna ka izao ny vokany. Fa androany dia hisy ny fametrahana ny vato fehizoron’ny “Bataillon interarmes de l’Armée” Malagasy (BIA) faharoa izao atao ao Tsiroanomandidy, izay hiarahana amin’ireo Ministera voakasika. Tsy nety ny rafitra izay nitantanana izany tsy fandriampahalemana izany teto Madagasikara, ka ezahin’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao ny fampanankaikezana ireo rafitra miandraikitra ny fandriampahalemana ireo ny vahoaka, isan’izany io fananganana ny BIA androany io, ary afaka volana vitsivitsy dia ho amperinasa tanteraka izany. Raha samy mandray andraikitra ny tsirairay indrindra eny ifotony dia ho voavaha ny resaka tsy fandriampahalemana. Tokony hahasahy ny tsirairay indrindra fa ny eny anivon’ny fiarahamonina hitory ireo mpanao ratsy satria eny anivontsika eny izy ireo».
Nanantitrantitra ny Praiminisitra fa afaka andro vitsivitsy dia hampiantso ireo tomponandraikitra rehetra manerana an’I Madagasikara izay voakasiky ny resaka tsy fandriampahalemana, ny ao amin’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny Ministeran’ny Fitsarana, ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria ary ny Ministeran’ny Fiarovam-bahoaka mba hametrahana paikady hahitam-bokany ao anatin’ny fotoana fohy.
← Conseil du Gouvernement du Jeudi 15 Mars 2018
Conseil du Gouvernement du Jeudi 22 Mars 2018 →